मान्छेलाई कोरोना भाइरसले छुन्न – Yug Aahwan Daily
मान्छेलाई कोरोना भाइरसले छुन्न
युग संवाददाता । २६ मंसिर २०७७, शुक्रबार ०९:४४ मा प्रकाशित
439 पटक हेरिएको
हाम्रो देशमा कोरोना भाइरस असाधै दयालु पो रहेछ त । यो चाइँ फेरि केको दयालु भन्या होला भनेर न फट्फटिनोस् । हाम्रो देश भरिको के कुरा गर्नुहुन्छ, हाम्रै सुर्खेताँ हेर्नुस् न ! तपाईं विजुली अड्डाँ जानोस् त मान्छ्या कति ठेलमठेल लाइन हुन्छ । अनि त्यस्तै मालपोताँ जानोस् । हरेक झ्यालका अगाडि कति गाँड लाएर बस्या हुन्छन् मान्छे । तिनलाई न त्याँ मास्क चाइन्छ, न २ मिटरको दुरी, न सेनिटाईज । तिनलाई त्याँ जाँदा कैल्यै कोरोना लाग्दैन । अँझ अर्काे तरिकाले भन्नुपर्दा सरकारी कार्यालय जाँसुकै जानोस् । चाहे कर तिर्न कर कार्यालय, चाहे पानी कार्यालय, सरकारलाई पैसा बुझाउन जाने कुराँ स्वास्थ्या मापदण्ड केइ चाहिएन । यी ठाँ गा बेलाँ कुनै मान्छेलाई कोरोना भाइरसले छुन्न । तर तपाईं हामी अरु काममा वा बजाराँ जाम त, त्याँ गयो भने भाइरस सर्ने डरले मास्क र सेनिटाइजराँ खोला पानी बगाएझैँ बगा बगाइछम् ।
अब त यो सेनिटाइजर र मास्क बनाउने कम्पनी र बेच्ने ब्यारीले नी कति पैसा कमाउने हो के ? कमाउँदा कमाउँदै वाक्क दिक्क भए होलान् के । न्युनतम ढाइ सयदेखि १५ सयसम्ममा बेच्या मास्क, ऐले कमाउँदा कमाउँदा १० रुप्पियाँदेखि ७० रुप्याँ सम्माँ आएछि कोरोनाको नामाँ मास्क र सेनिटाइजर बेच्नेले नेपालीलाई कति लुटे होलान् । हिसाब किताब गर्नै गाह्रोे छ । १२ वर्षा खोलोनी फर्कन्छ भन्छन् त्यै होला । बर्ष भरियाँ दशोटा नि मास्क नबेच्नेले ऐले कोरोना आएछि ९ मैना अवधियाँ कति बेचे होलान् । सायद हिसाब गरी साध्य छैन । जनसम्पर्क हुने कार्यालयाँ र सरकारलाई रकम बुझाउने कार्यालयाँ नजाने यिनी कोरोना लक्षण बुझेरै होला । हाम्रा अर्थ मन्त्रीहरूले नि आर्थिक मामिलाँ तुरुन्त राफसाफ गराउने उर्दि जारी गर्या हुन्छन् । त्यसो त कोरोनाको नामाँ सरकारी कार्यालय मालपोतलाई ब्यान र बेलका खोलेर नि कर्मचारी र दलाल मिलेरसमेत काम गराए ।
अघिल्लो मैनासम्म मालपोत कार्यालयाँ कसैले था नपाउने गरी ब्यान बेल्कानी काम गरे । पछि कताकताट घुस काण्ड र फोन काण्ड बाहिरिएछि एकदुई दिन मालपोताँ हंगामै भो । सामान्य मान्छेले सुर्खेत मालपोताँ कुनै कामले जान्छ भने कम्तियाँ नौ दिनभन्दा बढी लाग्छ । कार्यालयले ऐलेसम्म कसरी छिटो छरितो र मान्छयाभिड हटाउन सकिन्छ भनेर उपाय रच्नै सक्याछैन् । त्यै ताल कर कार्यालया नि छ । त्यसै त रकम नखाई काम गर्न गराउनै नसकिले यी सरकारी अड्डा अँझ भएन भने मान्छेलाई लाइनमा लाएर काम गराऊँदा कसरी पैसो( घुस) माग्ने हो के ! त्यै हुलमुलाँ माग्यो भने उल्टो हल्लिखल्लि गर्देभने लाज भएन । त्यसैले केइ कार्यालयका कर्मचारी ऐले मर्नु कि बौलाउनु भा छन । हाम्रो देशको पक्षपाति कोरोनालाई अब धेरै पालेर नि काम छैन । बरु सरकारले जति सक्यो छिटो भ्याक्सिन मगाएर कोरोना भगाए हुने हो । यस्तै ताल हो भने कोरोना रिसाएर मालपोत, कर, विजुली, मालपोत, ब्यांक जस्ता कार्यालयका लाइनाँ बस्नेका माझाँ गएर कोरोना भाइरस घुस्यो भने अनि सरकारको कमाइ खाने बाटै बन्द होला । अनि खाउला ! बेलैमा चेतना भया ।
पार्टी फुटालेर ओलीबाको हैकमवादलाई चुनौति
एमालेका १० नम्बरीहरुलाई ओलिबाकाे झड्का
सुर्खेताँ निकै धनी मान्छे बस्दा रैछन्
देशमा राजाले गरेको भन्दा राम्रो गर्छम भन्थे तिन्ल्यै सत्ता चलाए